I-10 YEENDLEBE EZINGENAZINGCINGO ZOKUSEBENZA KUHLAHLO-LWABIWO MALI LWANGO-2021 - UMSEBENZI WOKUSEBENZA
I-10 yee-Earbuds ezingenazingcingo ezilungileyo kuzo zonke iindidi zomsebenzi
Inkqubo ye- inani elifanelekileyo lokukhuthaza iyimfuneko kuyo nayiphi na imeko yokomelela komzimba. Kodwa ungafikelela kude kangakanani ngaphandle kohlu lwadlalwayo olungumbulali? Nokuba ungazikhethela ntoni umthambo, ii-earbuds ezingenazingcingo zilungile. Nokuba upompa isinyithi kwi-Iron Maiden okanye ngebhayisekile ukuya kwi-Bach, mhlawumbi uye waziva amandla amakhulu omculo onawo ngexesha lokuzilolonga.
Inyaniso, uphando ibonisa ukumamela umculo oqhubayo kunokudala ukujonga okuhle, kukubeka kwimeko elungileyo ukubila. Enye ukufunda bafumanise ukuba abantu abamamela umculo kwitreadmill bonyusa isantya kunye nomgama wabo ngaphandle kokuziva bediniwe. Umculo usenokunceda ukulibazisa ukudinwa .
Kodwa ngeendlela ezininzi phaya, ukukhetha ii-earbuds ezilungileyo ezingenazingcingo phantse kunzima njengokufumana uluhlu lokudlala olungcono.
Inani leengelosi ezili-111
Uyifumana njani eyona earbuds engenazingcingo ekusebenzeni kwayo
Ngaphandle kwendlela abathengiswa ngayo, ii-earbuds zokuzilolonga azilingani konke konke, utsho USareena Rama , uqeqesho lomntu oqinisekisiweyo kunye nomqeqeshi weqela lomzimba e-Orange County, CA. Gcina ezi ngcebiso engqondweni xa uthengela isibini sakho.
Qwalasela ubungakanani be-IP. Kubantu abaninzi, ukumelana nokubila kuya kuba yinto ephambili, utshilo uRama. Ukungenwa kwamanzi kulinganiswa ngumgangatho we-IP (ukhuselo lwe-ingress), oqala ukusuka kwi-IPX0 kubuchwephesha ngaphandle kokukhuselwa kulwelo ukuya kwi-IPX8 yezixhobo ezinokuntywiliselwa nzulu kunemitha enye yamanzi. Ukulinganiswa kwe-IPX akusisigxina, ke ii-headphone zakho zinokunganyangeki ngamanzi ngokuhamba kwexesha.
I-IPX4 yindawo elungileyo ukuqala, kuba ii-headphone ziya kuba yimvula- kunye nokubila. Okwangoku, izixhobo ezilinganiswe nge-IPX6 zinokucocwa kwisinki, ngelixa i-IPX7-enezinto ezinokulinganiswa zinokuntywiliselwa ngokupheleleyo emanzini angenzulwanga kangangesiqingatha seyure (ayikuko ukuba ufuna ukuyenza loo nto, nokuba kunjalo). Ukuba awuyi kufumana ngakumbi ukubila , nangona kunjalo, kulungile ukuba ii-earbuds zakho ezingenazingcingo azinayo i-IP rating.
✔️ Thatha isigqibo sokuba uyafuna na ngokwenene Andifuni zingcingo. Uninzi lwezinto ezithandwayo onokuzikhetha ngaphandle kwamacingo. Kodwa ezinye zibandakanya ucingo oludibanisa ii-buds kuphela, eziluncedo kwiimeko ezimbalwa eziqhelekileyo. URama ucebisa ngokuya ngocingo oludibanisayo ukuba uqalisa ukusebenza nzima okanye ukubila, njengokubaleka ngaphandle. Ngaphandle koko, amahlumela ahlukeneyo alungile, okoko ahlala ekhuselekile ezindlebeni zakho.
Musa ukubila ubomi bebhetri. Ngokwam ndicinga ukuba ubomi bebhetri bubalulekile kuphela xa ukusebenza kwakho kungaphezulu kwemizuzu engama-45, ucacisa uRama. Ibhetri enkulu ngokwenene iyadityaniswa, kodwa mhlawumbi ayisosidingo ngaphandle kokuba ungumkhweli webhayisikile, imbaleki , okanye iimbaleki ezinyamezelayo-ayifanelanga ukuba yeyona nto ibalulekileyo kwiimbaleki eziqhelekileyo, uyacebisa.
Ezinye izinto ezintle zibandakanya ukhetho oluninzi lwebud, ityala lokutshaja, kunye nokudityaniswa kwenkqubo yokusebenza yefowuni yakho. Ngoku, lixesha lokuba ujonge ezona ndlebe zokuzivocavoca zibalaseleyo kuwe-jonga i-10 enexabiso eliphezulu, ezikhethwe yingcali apha ngezantsi.
IPX7 | Iiyure ezingama-6
Kukho isizathu esingenako yeka Ukuthetha ngeJaybird Vistas: Ezi ndlebe zomsebenzi zezona zinto ziyinyani. Kudala ndikhangela ii-headphone zeBluetooth ezifanelekileyo ezingazukuwa ezindlebeni zam xa ndisebenza, umqeqeshi u-Adele Jackson-Gibson wayebhalele ngaphambili Uthintelo , efumana la mabhaso okomelela ngo-2021. Ndamangaliswa kukufumanisa oko azide ziwe xa ndijika ndijongise ezantsi ! Umgangatho womculo uqinile, nawo, ke ndiye ndifike kwi-jam.
2Ixabiso elifanelekileyoSenso Iifowuni zeBluetooth ezingenazingcingo amazon.com $ 29.99$ 26.96 (10% icinyiwe) THENGA NGOKU
IPX7 | Iiyure eziyi-8
Ukuba ujonga ii-headphone zeBluetooth ongoyikiyo ukuphulukana nazo, amawakawaka abahlaziyi baseAmazon bacebisa ezi, zona nikeza ukukhuselwa okukhulu kokubila kunye nesandi esifanelekileyo esiphantsi kwe- $ 30 . Ezi zilungile. Ikhululekile kakhulu, ilula kakhulu, kwaye ilunge kakhulu ekusebenzeni, kubhale umvavanyi omnye. Ngokukhawuleza emva kokuzifumana ndazisebenzisa isiqingatha semarathon kwaye andinangxaki kwaphela. Umgangatho wesandi ulungile, ivolumu ilungile, uqhagamshelo lwe-BT luthembekile, kwaye awugungqi nangokubila kunye nentshukumo enzima.
3Eyona ndawo ingcono yokuRhoxisaIProPods Pro IAmazon$ 197.00 THENGA NGOKU
IPX4 | Iiyure eziyi-4,5
Nokuba usebenza phi na, ukucinywa kwengxolo kusenokwenzeka ukuba kulunge-kwaye ezi ndlebe zintle, zithandwayo zithandwayo zilungele umsebenzi. URama ufunga nge-AirPods Pro, enganyangekiyo ukubila kunabazala babo abancinci. Ukwazi uku tshintsha iingoma ngokulula ngokuthepha i-earbud indenze ndaziva ndipholile, utsho, kwaye uyayixabisa into yokuba i-iPhone yakho inokumisela ukuba zeziphi iingcebiso zesilicone ezilingana kakuhle ezindlebeni zakho.
4Eyona Ndlebe igqwesileyoIbetha iPowerbeats Pro amazon.com $ 249.95$ 179.95 (28% icinyiwe) THENGA NGOKU
IPX4 | 9 iiyure
Ngendlebe yabo yokutyikitya indlebe, i-top-notch Bluetooth, kunye ne-Apple tech, ezi earbuds ezingenazingcingo aziyi kunyuka ngexesha le-cardio, ukuphakamisa, okanye HIIT . Ndilibele ukuba ndinazo, ngaphandle kwento yokuba bendineebhasikithi ezicocekileyo ezidlala ezindlebeni zam, utshilo omnye umvavanyi waseAmazon, owayengazange athande nonwele lwee-headphone ngaphambi kwezi. Emva kweemayile ezi-3 ... ndaqonda Khange ndikhe ndihlengahlengise okanye ndibatyhalele ndibuyele endlebeni , hayi kube kanye!
5Eyona WiredI-Bose SoundSport Iindlebe ezingenazingcingo amazon.com$ 129.00 THENGA NGOKU
IPX4 | Iiyure ezingama-6
Ngokobuchwephesha, kukho ucingo oludibanisa ezi ndlebe, kodwa alunxibelelani nefowuni yakho, oko kuthetha ukuba uza kufumana zonke izibonelelo zeBluetooth. Kaninzi ukukwazi uku shiya i-bud ejingayo ngaphandle koloyiko lokuphulukana nayo . Iimbaleki kunye nabahambahambayo, ezi zenzelwe wena. Ukulingana kufanelekile, umvavanyi omnye uyathandabuza. Ndibaleka kuzo, kwaye aziweli ngaphandle. Ulawulo olulula (ivolumu, ukutsiba kwengoma), kunye nombala omnandi. Isandi esihle.
6Eyona Bomi yoBomiI-Sony WF-SP800N Iindlebe amazon.com$ 198.01 THENGA NGOKU
IP55 | 9 iiyure
Ngenye yeebhetri ezihlala ixesha elide esizibonileyo kwisibini seendlebe ezingenazingcingo, olu khetho lukaSony luba xa kuthelekiswa nezinye iimodeli. (Ibhetri nokuba Iibhaluni ukuya kwiiyure ezili-13 xa ukucinywa kwengxolo kucinyiwe .) Kwaye ikhonkco lendlebe elikhuselekileyo kunye neebhasi ezongezelelweyo ziicherry ngaphezulu. Ezi zezam iindlebe endizithandayo ezintsha ebhodini, utsho omnye umvavanyi, ongumkhweli webhayisikile kunye nembaleki. Ndizifumana ndifikelela kwezi seshoni zomsebenzi wokusondeza iiyure ezininzi kunye nokusebenza nzima okanye kufutshane nendlu ngelixa ndisenza imisebenzi yasekhaya.
7Isandi esifanelekileyoUkubetha iiPowerbeats Walmart.com$ 128.99 THENGA NGOKU
IPX4 | Iiyure ezili-15
Ezo Powerbeats ezifanayo zivela phezulu nazo zilungile njengokhetho olunentambo-kwaye abavavanyi bathi umgangatho wabo wesandi ucocekile. Ibhetri ephantsi ayisiyongxaki, nokuba, ekubeni kunjalo imizuzu emihlanu yokutshaja inikezela ukuya kwiyure enye yejusi . Ndibethwa ngumoya, utshilo omnye umvavanyi, othetha ngesandi esimangalisayo, umgangatho wesandi onokuthi uhlengahlengiswe, kunye nobomi bebhetri obukhulu. Kuya kuthatha ixesha elincinci ukubafumana bekhululekile, kodwa ayongxaki.
8Eyona ilungele iiFowuniIJabra Elite esebenzayo ye-75t Earbuds amazon.com$ 199.99 THENGA NGOKU
IP57 | Iiyure eziyi-5.5
Ezi earbuds ezingenazingcingo zeJabra zineemakrofoni ezicekeceke kangangokuba awuyi kufuna ukuba ume ikhefu lakho ukuze uthathe umnxeba. Ngaphezulu kobomi bebhetri obuninzi kunye nesandi esikhulu, bayaluphephetha ukhuphiswano xa kufikwa ekucaceni. Ndandihamba ngumoya kwaye kwakungekho kuncinci ekugqwethweni komoya kwelinye icala, omnye umvavanyi uhlasela. Ezi microphone zinceda ukwahlula ingxolo yangaphandle ukuze ilizwi lakho kuphela elijolise . Basebenza, kwaye basebenza kakuhle.
9Eyona ilungele abasebenzisi beAppleIiapile zomoya Walmart.com$ 149,99 THENGA NGOKU
Ayilinganisiwe | Iiyure ezi-5
Nangona bengengabo abachaphazelayo kwezobuchwephesha, ii-AirPod ezixhaphakileyo zisesekuhambeni kweembaleki ezingenakubalwa. Abaqeqeshi ababini abohlukeneyo ngaphambili bacebisa ngezi headphone kuthi ngenxa yabo ukusebenziseka lula, ukubamba okunamandla ngokumangalisayo, kunye nokudityaniswa kwe-Apple ye-Apple , Eziza kuluncedo xa ungumsebenzisi we-iPhone ujonge ukufumana okuninzi kwisibini seendlebe.
10Eyona ilungele ukuhamba ngebhayisikilePhuma kwi-BCS-700 amazon.com$ 54.99 THENGA NGOKU
IPX4 | Iiyure eziyi-8
Ucingo oluqinileyo phakathi kwezi ntloko zeefowuni lithetha ulwakhiwo lonke uhlala endaweni ngexesha lokuzilolonga kakhulu -Efanelekileyo yokuhamba ngebhayisikile kunye nokubaleka, xa usengozini yokuphulukana ne-earbud apha endleleni. Ndizisebenzisa ngokoqobo ii-headsets zam zebluetooth imini yonke, phantse kuzo zonke iinjongo, utsho omnye umvavanyi obalekayo kunye nokubaleka. Andiqondi ukuba ungasibetha esi sixhobo.
Eyona khrimu yesandla yolusu olomileyo
I-lotion efanelekileyo yesikhumba esomileyo kakhulu
izihlangu ezilungileyo zokuhamba kunye nokuma yonke imini
umyalezo weengelosi 555
Ingelosi enentsingiselo engama-444